I-Série A yiyona ntlukwano ebalulekileyo yebhola yaseBrazil. Ngoku iqulunqwe ngamaqela angama-20, apho amaqela angama-4 asezantsi avela kwi-Série A aphelelwa ngaphandle kwaye amaqela aphezulu angama-4 avela kwi-Serie B aphakanyiswa.
Ngokomlando, ubuqhankqalazi babedume ngokungazilungelelanisi kakhulu, kuba nemithetho yayo ishintshile ukususela kwixesha ukuya kwixesha (kunye ngamanye amaxesha nakwixesha eliphakathi kwenkathi), ngokubanzi ukukhusela amakilabhu emveli ukuba angabandakanywa (ngokukodwa ngo-1993, 1996 no-2000) okanye ngenxa yokuba Zetyala ezifakwe ngamachule ukuze zikhusele ukuba zixhomekeke (1997 no-2000). Nangona kunjalo, ukususela ngo-2003, i-Série A iye yaphikisana kwifom ye-double-robin format. Ngamanye amagama, iqela ngalinye lidlala ngokumelene nekhaya kwaye kude, kwaye iqela elinamanqaku amaninzi lichazwe njengeqhawe. Akukho mdlalo wokugqibela, ongowomxholo onzima kakhulu. Ngaphambi kuka-2003, iqela lobungqina beBrazil liye lagqitywa ngohlobo oluthile lwefomathi (ikakhulukazi "i-Octagonal"), apho amaqela aphezulu angama-8 aqhelekileyo aquka iqela elilodwa lokuphelisa), kunokuba imodeli yaseYurophu yamanqaku aqokelelwe ngexesha lonyaka . Nangona ezinye i-purist zikhalaza ukuba le nkqubo ayikho umdlalo we-playoffs kunye neyokugqibela, iqela liye labonisa ukuba lilungelelanise, ngaphandle kwenani elilinganiselwe lamagosa alawulwa kwilungu njengoko kufumaneka kwiilwimi ezininzi zaseYurophu.
Ngo-2005, iqela ngalinye lidlale imidlalo ye-42, i-21 ekhaya kunye ne-21, ukuya kuma-462 imidlalo. Iqhawe kunye nomgijimi-ogijima ngokuzenzekelayo kwi-Cup Libertadores ka-2006. Iqela lesithathu kunye neyesine elibekwayo lingaphinda limele iBrazil kwiiLebertadores ngokutshayisa amaqela angaphandle angagqitywa yiConmebol kwiilingo zangaphambili. Iqhawe kunye ne-5 ukuya kwe-11 ibeke amaqela aphumelele ilungelo lokumela iBrazil kwiCopa Sudamericana, elinye iqela lobungqina baseMzantsi Melika lobunzima obuphantsi. Iinqanaba ezine zokugqibela (ii-19, 20, 21 neye-22) zaxhaswa kwiSérie B.
Iimidlalo ezilishumi elinanye zokhuphiswano luka-2005 zachithwa ngenxa yesikhalazo sokulungisa umdlalo kwaye kwafuneka ziphindwe.
Ngonyaka we-2006, inani labadlali behlisiwe liye lancipha ukuya kuma-20, kwaye ii-CBF zibiza ukuba "ifomathi" ecacileyo.
Last edited on 17 Eyo Mnga 2020, at 03:48
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-17 Eyo Mnga 2020, kwi-03:48